Anyị ga-ekwurịta otú ime akara VLC enweghị ihe ọ bụla ngwa ọdịnala na kọmputa gị (Windows na Mac) na nkebi nke a nke isiokwu. Lee ndị nzọụkwụ aka.
Part 1: Olee otú Ime akara VLC enweghị App
Part 2: Olee otú Ime akara VLC na VLC Ime
Part 3: Gịnị bụ VLC Ime
Part 4: VLC Ime uzo ozo
Nzọụkwụ 1: mbụ, nwee VLC Media Player si http Interface
• Access na VLC ntọala - Ịnyagharịa VLC NchNhr> Ngwaọrụ> Mmasị
• Họrọ redio button All na ala ekpe nke ihuenyo, na-egosi na niile ntọala maka VLC Media Player (ndabara VLC nanị na-egosi ndị akacha eji ntọala)
• Gaa Main ihu mmasị peeji - na nhọrọ maka ihu gbasaa, họrọ Main ihu
• Lelee Web nhọrọ - Nke a ga-egosi ugbu a http na ederede igbe n'okpuru
Nzọụkwụ 2: Mee paswọọdụ gị
• Ugbu a, họrọ nhọrọ Lua nyere n'aka-ekpe n'akụkụ na-abanye na paswọọdụ dị ka e gosiri na screenshot n'okpuru
• Anyị na-akwado ị na-eji a ndabara paswọọdụ dị ka 'vlcremote', nke mere na n'ime ime obodo ga-ejikọ na akpaghị enweghị gị mkpa pịnye ke paswọọdụ gị ọzọ oge ọzọ
• Họrọ Chekwa iji zọpụta ndị a mmasị gị nke
• Ma, ịkwụsị VLC ka reopen ya
Nzọụkwụ 3: Ka VLC site na gị firewall
N'elu launching VLC ọzọ, Windows pụrụ ịjụ gị iji gosi ma ị chọrọ ya egbochi ma ọ bụ unblocked, họrọ ịkpọghee. Nke a ga-ugbu a na-ekwe ka mgbasa ozi ọkpụkpọ-ekwurịta okwu na mkpanaka gị na ngwaọrụ (na Anglịkan). Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ na njikere dị ka e kwuru n'elu mgbe ahụ i kwesịrị aka ime usoro ka na-ekwe ka VLC Media Player site na gị firewall. Biko, na-eso nzọụkwụ ndị a na-enwe ike iji nweta na.
• Mepee Control Panel nke na kọmputa gị (Malite> Control Panel)
• Ụdị firewall na search igbe na pịa Tinye
• Họrọ nhọrọ Kwe Ka a omume site Windows firewall
• Gbaa mbọ hụ na igbe dị n'akụkụ VLC maka ma ọha na onwe netwọk na-enyocha
Ọ bụ ya! Ugbu a, gị na kọmputa bụ njikere na-achịkwa remotely.
Na-enwe ike iji VLC Ime ịchịkwa VLC Media Player, ị kwesịrị ịrụ ndị na-esonụ n'ụzọ ziri ezi.
Nzọụkwụ 1: na-akwadebe gị na kọmputa
Tupu wụnye ngwa, ị ga-akpa-eme ka a ole na ole mgbanwe ndabara VLC Media Player arụnyere na kọmputa gị ka ka ekwentị gị ịchọpụta VLC kwesịrị ekwesị.
• Run VLC ma họrọ Ngwaọrụ> Mmasị. Mgbe ahụ, họrọ All n'okpuru ngalaba Gosi.
• Nke a ga-ugbu a na-emeghe elu ntọala ngalaba maka VLC. Pịa na Interface> Main ihu na mgbe ahụ ịlele Ime akara interface nhọrọ.
Nzọụkwụ 2: Ịtọlite ​​VLC Ime
• Mgbe mwube VLC na kọmputa gị dị ka kọwara n'elu, ị kwesịrị ị na ugbu a ibudata ma wụnye VLC Ime na mkpanaka gị na ngwaọrụ ahụ; na-esonụ bụ na njikọ ibudata ngwa.
• Ozugbo ngwa arụnyere, malite VLC na kọmputa gị mere na ngwa bụ ike na-arụ ọrụ.
• Ẹkedori ke VLC Ime ngwa na ngwaọrụ gị ugbu a, ọ kwesịrị ugbu a na-akpaghị aka bulie aha nke video faịlụ na a na-egwuri na kọmputa gị.
• Ọ bụrụ na ngwa bụ enweghị ike na-akpaghị aka ịchọpụta kọmputa gị n'ihi ihe ụfọdụ, mgbe ahụ ị ga-ejikọta ya na gị na kọmputa na adreesị IP aka.
• N'ihi na, họrọ NchNhr na Ntọala.
• N'okpuru Ntọala menu ego ma hụ na ị bụ na n'ụlọ gị gị na ikuku na netwọk. Ozugbo jikọọ n'ụlọ gị gị na ikuku na netwọk, họrọ Tinye VLC nkesa.
• Ugbu a, ụdị na adreesị IP gị (atụ 193.169.2.201) na-ahapụ Port dị ka ndabere 8080.
• E ị na-aga, ugbu a, ị kwesịrị ị na-ejikọrịrị kọmputa gị VLC ngwa.
Nkebi nke 3: Gịnị bụ VLC Ime
VLC Ime amama ekwentị gị gaa na a ime akara maka VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-ahapụ ị na-anọdụ azụ, zuru ike na ịchịkwa ihe si gị mfe oche.
VLC Ime nwere nnọọ mfe iji interface na nile bụ isi ntọala nwere ike inweta site na isi interface onwe ya. Ị nwere ike ịnweta na-esonụ:
• Ihuenyo zuru oke
• Mpịakọta Controls
• Aha faịlụ
• Chọọ Ntọala
• Mgbe ị pịa na-agagharị Media button, ọ ga-ẹkedori a faịlụ nchọgharị na-ahapụ gị ahụ ihe niile na faịlụ / nchekwa na kọmputa gị. Cheta na n'ihi na nke a na VLC Media Player ga-agba ọsọ na kọmputa gị.
• Ị nwere ike ọbụna ịtọ kpọmkwem nchekwa na e dere gị niile media ka Home nchekwa. N'ihi na nke a, nanị ogologo pịa Home button ruo mgbe i na-ozi Home setịpụrụ na-[nchekwa aha].
• Ị nwere ike igwu ọ bụla media faịlụ dakọtara na VLC na kọmputa gị ugbu a.
Nkebi nke 4: VLC Ime uzo ozo
1. n'Otu Ime
N'otu Ime amama gị gam akporo ngwaọrụ n'ime a WiFi / Bluetooth ime akara maka ihe niile omume na gị Windows kọmputa.
Na-enye ohere otu na-agba ọsọ ma na-achịkwa fim / music na kọmputa gị, n'ebe dị anya.
3. KDE Jikọọ
Ọ enyekwara gị gam akporo ngwaọrụ na KDE Desktọpụ. Ị ga nwere ibudata desktọọpụ version dị ka mma.
Ọzọ na ngwa na-amama gị smart ekwentị n'ime a WiFi ime akara, i nwere ike imeghe internet nchọgharị na ịnyagharịa ka peeji nke ị chọrọ ileta, jiri music ọkpụkpọ ma ọ bụ mgbasa ozi center enweghị kpọmkwem na-arụ ọrụ na PC gị na ma ọ bụ na laptọọpụ.
5. Ime Control maka VLC
Ọ bụ ihe na iPhone / iPad ngwa na-ahapụ gị ịchịkwa VLC Media Player n'elu a WiFi njikọ, remotely.
> Resource> VLC> Olee otú iji Ime akara VLC